Vanofanira pasingadiwi aurayiwe? | Apg29
Ndinofanira kurangwa norufu sezvo kunaka?
Zvino ndinonyora bhuku rangu rechipiri rinonzi "The vasingadiwi". Zviri pamusoro pauduku hwangu, sei I Unsolicited akauya ino.
Sokuudzwa kwandiri kuti ndakanga zvakawanda kana zvishoma chibharo. Zvandinokuudzai rangu rinotevera bhuku, vasingadiwi. Ndingada pasingadiwi kutongerwa rufu yokubvisa pamuviri?
Kana ndasvika akwegura kana vanorwara, Ndinofanira kutongerwa rufu sezvo pasingadiwi ne "euthanasia"?
Tinoona kuti vana vose asati aberekwa, vanorwara uye vakwegura vari kurarama ngozi. Vanogona nguva dzose kuurayiwa nokuti havazi anodiwa kana inokosha zvakakwana. Zvichida vane pfungwa iyi kana kuti mumwe munhu akati izvozvo.
dzimwe shamwari vakanga uchiratidza pamusoro pamuviri, ipapo munhu, achiti: "Kuti hamusi kunyara!" Anofanira asinganyari nekukoshesa upenyu? Sei kunaka asina ichi chave? Uyo aizova vachanyadziswa ndiye akataura izvozvo.